Ururka Dutchtown West Neighborhood Association • DutchtownSTL.org • Dutchtown, St. Louis, MO
Jaaliyada Dutchtown West Neighborhood (DWNA) waxay ujirtaa inay hagaajiso tayada guud ee nolosha, dareenka bulshada, iyo ku faanida xaafaddeena magaalo oo kutaala galbeedka Dutchtown magaalada St. Louis, Missouri.
Diiradeena koowaad waa qeybta xaafada Dutchtown ee galbeedka Grand, hase yeeshe qof walba waa lagu soo dhaweynayaa inuu ka soo qeyb galo shirarkeena iyadoo aan loo eegin meesha aad ku nooshahay. Nagala soo qaybgal — wadajir waxaan ku caawin karnaa hagaajinta bulshadayada iyo magaaladeena!
Kulamada Dutchtown West
Xaaladda socota ee COVID-19 awgeed, kulammadii ayaa hakad ku jira. Waxaan dib u bilaabi doonnaa shirarka markay nabdoon tahay in deriskayagu kulmaan. Dhanka kale, saxeex hoose si aad ula socoto waxyaabaha ka dhacaya Dutchtown
Kulamadu waa Arbacada labaad ee bil kasta, 7 fiidnimo, Hoolka Hoolka ee Makhaayada Grbic iyo Goobta Dhacdooyinka, 4071 Keokuk Street ee Meramec. Kulamada badankood waxay soo bandhigaan cusbooneysiinta Alderman, Khabiirka Horumarinta Xaafadda, Sarkaalka Xiriirka Xaafadda, iyo kuwa kale oo hadla. Haddii aad xiisaynayso inaad wax ku soo bandhigto kulan, fadlan nala soo xidhiidh.
Khayraadka Dutchtown West
Xafiiska Adeegga Muwaadiniinta: (314) 622-4800 ama @stlcsb on Twitter inaad codsato adeegyada Magaalada
Khabiirka Horumarinta Xaafadaha ee Ward 25 Christian Saller: SallerC@stlouis-mo.gov ama (314) 657-1375
SLMPD Degmada Kowaad: (314) 231-1212 oo loogu talagalay xaaladaha degdegga ah, 911 ee xaaladaha degdegga ah
Sarkaalka Xiriirka Xaafadda Steve Burle: SMburle@slmpd.org
Ward 25 Aaabaheed Shane Cohn: CohnS@stlouis-mo.gov
Fadlan xusuusnow markaad u soo tebinaysid waxqabad rabshad leh ama waxyaabo waxyeelo u geysato CSB ama booliska tixraac cinwaanka dhabta ah ee dhibaatadu ku taal. Waxqabadka waxaa lagu duubay cinwaanka, oo si sax ah u fiirsashada cinwaanka ayaa gacan ka geysanaya dhisidda kiisaska ka dhanka ah guryaha dhibaatada.
Kheyraad badan oo Dutchtown ah
Si aad u hesho xaafad iyo ilo dhaqaale oo badan, booqo Bogga Kheyraadka DutchtownSTL, oo ay ku jiraan kuweenna hagaha CSB, macluumaad ku saabsan Khabiirrada Horumarinta Xaafadaha, Iyo sida loola xiriiro Waaxda Booliska ee St..
Subscribe to our liiska waraaqaha
Hoos iska qor hoosta bilwalba xusuusinta kulanka DWNA, oo lagu daray wararka, dhacdooyinka, ilaha, iyo inbadan oo ka socda dhamaan Dutchtown.
Kaliya cinwaanka emaylkaaga ayaa loo baahan yahay, laakiin waxaad bixin kartaa macluumaad dheeraad ah oo ikhtiyaari ah si aad nooga caawiso inaan waxbadan ka ogaano bulshada aan u adeegno.
Miyaad jeceshahay inaad wax badan nooga sheegto naftaada? Sure! Maya mahadsanid. Buuxi qaar ka mid ah beeraha dheeriga ah si aan si fiican u ogaanno cidda aan u adeegno. Dhammaantood waa ikhtiyaari.
Cinwaanka Line 2
Ma ku nooshahay aagga Dutchtown? Haa Maya
Ma degan tahay galbeedka Grand? Haa Maya
Miyaad kiraysataa mise waad iska leedahay gurigaaga? Rent Lahaansho Doorbiday inaanan jawaabin
Mudo intee le'eg ayaad ku nooshahay Dutchtown? Maalmaha, bilaha, sannadaha, ama waxkastoo qiyaastaada ugu fiican ay tahay.
Ma ka shaqeysaa ama meherad ku leedahay Dutchtown? Waxaan ka shaqeeyaa Dutchtown. Waxaan ganacsi ku leeyahay Dutchtown. Midkoodna
Xagee ka shaqeysaa? Xusuusin, tani dhammaantood waa ikhtiyaari. Kaliya wadaag waxa aad rabto.
Waa maxay magaca meheraddaadu?
Ma xiiseyneysaa inaad tabaruc ugu sameyso Dutchtown? Haa Maya
Maxaad jeclaan lahayd inaad ku tabarucdo? Waxaan soo dhaweyneynaa xirfad kasta iyo dhammaanteed.
Saxeex Liistadayada Boosta
La wadaag boggan Facebook, Twitter, ama maraya Email. Boggan waxaa markii ugu dambeysay la cusbooneysiiyay November 14th, 2020 .
DutchtownSTL.org Ururka Dutchtown West Neighborhood